चिसो अझै बढ्ने मौसमविदको भनाई
काठमाडौं, २९ मंसिर – पश्चिमी वायुको प्रभाव सकिएर सोमबार मुलुकभरको मौसममा सामान्य सुधार आएपनि उक्त वायु पुनः सक्रिय हुँदै गएका कारण अझै केही दिन मौसम बदली भई चिसो बढ्ने मौसम विज्ञान विभाग पुर्वानुमान शाखाले जनाएको छ ।	अरब सागरबाट पाकिस्तान,
काठमाडौं,मंसिर २९ - एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानका मुख्य विषयवस्तुमा सहमति नगरि प्रक्रिया अगाडि बढाए कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमाओवादीको आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संघीयता, राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा प्रमुख दलबीच सहमति भएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने अन्यथा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरुबीचको बैठकमा भएको छलफलका बारेमा जानकारी गराएपछि संसदीय दलले विवादित विषय फेरि संविधानसभामा फर्काउनका लागि दबाब दिने निर्णय गरेको हो । मुख्य विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएपछि मात्र नियमावली र आन्तरिक कार्यतालिका परिवर्तन गरिनुपर्ने एमाओवादीको भनाइ छ । संसदीय दलले संविधान निर्माण्ँको प्रक्रिया निकै जटिल मोडमा पुगेको भन्दै संविधानसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सभासदलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर २९ -परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले कुनैपनि विदेशीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । उहाँले ‘बेलायती राजदूत एन्डी स्पाक्र्सले ‘नया“ संविधानमा धर्म परिवर्तनको अधिकार सुरक्षित गर्न भन्दै खुला अभियान थाल्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप’ भएको बतायनुभएको हो । राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले बेलायती राजदूतले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको समेत बताउनुभयो । सो अवसरमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सन्चारमाध्यमले संयमित भएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसैबीच, धर्म परिवर्तनको पक्षमा वकालत गरेका बेलायती राजदूत स्पाक्र्स बेलायत फर्केपछि उनीसग स्पष्टिकरण सोध्ने सरकारको प्रयास असफल भएको छ । तर, आज परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायती दूतावासका ‘चार्ज डी अफेयर्स’ गाइ ह्यारिसनलाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टिकरण सोधेको छ । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले बेलायती कार्यबाहक राजदूत ह्यारिसनसग राजदूत स्पाक्र्सको अभिब्यक्तिबारे जवाफ मागेका थिए । बेलायती राजदूतको अभिव्यक्तिविरुद्ध नेपालमा विरोध चर्केपछि उनी छुट्टिका लागि भन्दै हिजो राति नै बेलायत फर्केको बुझिएको छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढायो (नयाँ तालिकासहित)
काठमाडौं, २९ मंसिर – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस २ गतेदेखि लोडसेडिङ बढाउने भएको छ । हिउँद लागेसँगै खोला तथा नदीमा पानीको वहाव घटेर विद्युत उत्पादन कम भएपछि लाडसेडिङको अवधि दैनिक १० घण्टासम्म पुर्‍याउन लागेको हो । प्रणालीमा लोड अत्याधिक बढेको र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त आयोजना अझै मर्मत सम्भार हुन नसकेकाले लोडसेडिङ बढाउनुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि हप्तामा ८ घण्टासम्म रहेको लोडसेडिङ बढाएर १० घण्टासम्म पुर्‍याइएको छ ।
दक्षिण अफ्रिकी सुन्दरी रोलिनी स्ट्रस बनिन् विश्वसुन्दरी
काठमाडौं, २९ मंसिर – यसवर्षको विश्व सुन्दरीको उपाधि दक्षिण अफ्रिकी सुन्दरी रोलेन स्ट्रसले जितेकी छन् । आइतबार राती लण्डनमा भएको फाइनल प्रतियोगितामा २२ वर्षिय सुन्दुरीले १ सय २१ देशका सुन्दरीलाई पछि पार्दै ६४ औं संस्करणको उपाधि जितेकी हुन् । त्यस्तै हंगेरीकी इडिना कुल्सार रनर अप भएकी छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिकाकी एलिजाबेथ सफ्रित तेश्रो भइन् । चिकित्साविज्ञान चौथो वर्षकी विद्यार्थी स्ट्रस डाक्टर बाबु र नर्स आमाकी छोरी हुन् । ‘मैले सोच्न सकिरहेको छैन, यो के भइरहेको छ’ ताज पहिरिएपछि उनले भनिन् ‘ यो ठूलो जिम्मेवारी हो ।’ प्रतियोगितामा मिस नेपाल सुविन लिम्बुले पनि भाग लिएकी थिइन् ।